Calmaanigu waa abkee? (Waxa curiyey: Abwaan Yuusuf Cismaan Cabdille "Shaacir") | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Abwaan Yuusuf Shaacir
Maansadani waxay wax ka tilmaamaysaa aragtida calmaaniyadda oo ah in la kala saaro diinta iyo siyaasadda, amaba guud ahaanba diinta iyo nolosha; iyo aragti kale oo iyana la yidhaa Caqlaaniyadda oo aamisan in diinta laga hormariyo laguna saleeyo caqliga bani’aadamka. Haddii aynu dib u milicsano taariikhda, calmaaniyaddu waxay soo if-baxday ku sinnaan dabayaaqadii qarnigii 16aad kadib markii qaaradda Yurub ay isu kaashadeen boqortooyooyinkii iyo wadaaddadii kiniisadahu.Kuwaas oo cadaadis xoogleh saaray bulshadii ay xukumayeen.
Aqoonyahankii iyo dadwaynihii kale oo iskaashaday ayaa kacdoon kala horyimi. Dagaalo qadhaadh kadib waxaa la jabiyay boqortooyiiyinkii iyo wadaaddadii kaniisadaha. Halkaas ayay ka dhalatay figradda ku baaqaysa in la kala fogeeyo diinta iyo siyaasadda ama guud ahaanba nolosha iyo diinta. Aragtidani waxay jahawareer galisay caalamka Islaamka, waxaanay la jaan-qaadiwayday diinteena suuban.Waxaanay leedahay maansadu:
Af-iyo dhaqan baa jiree
Ekeeye haddaan la mudan
Shareeraha lagu astayn
Sarbeeb ubax looga dhigin
Xus iyo arar lagu dalayn
Ugaadhana loo qofayn
Murtida arad baa dilee
Ugbaadsiga haw daraan.
Aboodi dareen la kacay
Abwaan hore sii tilmaan
Asaayo intaanay dhicin
Astaamo jiraan gartaa
Amaano qofkii sidaw
Adduunyadu waa sabool
Abuurta nin diidanaw
Ilaah lama beenin karo
Afkaar nin ku doodayow
Aayaad culus baan arkaa
Ardaaguna waa xariir
Argeegta markaan dulsudho.
Adduunka sharbaa ku fiday
Ardaalo jinbaa u kacay
Aqoon nacabaa dhex taal
Abuurtu hankay lahayd
Jidkay ku agaasinayd
Ogaal kooduun ka dhigay
Abeeso ninkii yaqaan
Miyuu wax ku aaminaa
Awayti haddii la bido
Indhoole muxuu haggaa
Kumaa awr lagu xidhaa
Amaanku dhankee jiraa
Addoon ku badbaadayaa.
Indheer- garad waa yaqaan
Jidkii lagu oodmayee
Waxaan la ilduufi karin
Waxaan asaraarba galin
Islaamku halkuu wax dhigay
Ajana ruuxii sitaw
Waxaa lagu oon baxaa
lXareeda agtaada taal
Abeer ninka raadin jiray
Adeentida waa yaqaan
Calmaanigu waa abkee
Halkuu ku aroorayaa
Dhankuu waxka eegayaa
Markay asal sheegad tahay
Halkee odaygiisu galay
Awliyo sharbaa jirtee
Inshaaro muxuu yaqaan
Haddii xaqa lagu addimo
Intuu wax addeecayaa
Addoon ma rumaysan yahay
Haddii arrin loola tago
Anaani miyuu noqdaa
Ufiyo weedh baa jiree
Aloolka muxuu ku daday
Ugaaska ninkii ahaa
Abaanka muxuu ku falay
Anfaacigu waa xujee
Acmaasha muxuu u gaday
Afeef dhalan baa ka adag
Cadhiyo umal buu la kacay
Xantiisana waa og yahay
Wuxuu Aabaw nayidhi
Akhyaarta haddaa nacdaan
Calmaaniga eer sataan
Aqoonta raggii lahaa
Haddaa ku aleegadaan
Adduunka nimaan aqoon
Asaagii wax laqaybsanayn
Haddaa na agjoojisaan
Dharaar naga eexataan
Galool ubax laa jiree
Adaahi ku doorsataan
Amuuraha aan isgalin
Haddaa isku aabudhaan
Aftahan lagu soo hirtiyo
Ilbixi waa yaaban yahay.
Noloshu ma abaydin baa
Malcaamad nin ka soo aflaxay
Halkuu ka abbaarayaa
Iimaan nin ku doodayaa
Siduu u asiibayaa
Salaad ninka oogayee
Kitaab u adeegsadaa
Miyuu ku ammaanan yahay
Arkaantu miyay gashaa
Xafiis eedaan ka baxay
Muxuu ku astaysan yahay
Siyaasadu waa afkaar
Aayaadku ma soo galaan.
Haddaa ajar doonaysaan
Agoon dhaxal wayday iyo
Dulmiga maa oolisaan
Aroos maa meherisaan
Axkaamtu halkay lahayd
Asluubtaan beri iqiin
Masaajid ku urursanayd
Maxaa uga oogsateen
Habeen u abraaraysaan.
Jawaab nin ku aarsadaa
Nasteex kuma aadanee
Waxaa odaygii la yidhi
Ilaah waa laga baqaa
Aayaha waa loo tudhaa
Fircoon uubtuu ku dhacay
Ulbaa lays kaga dayaa
Naftuna edebbay rabtaa.
Ardaa lagu raagay
Ayaa tidhi eegga
Arbaw lagu sheegye
Markii arah loo tartamay
Af iyo laba daan tasheen
Adoonba adoon wax biday
Kashana laga sii araday
Asoolka markay janteen
Naftii uskak raaciyeen
Siyaasad ku abadarmeen
Qof iyo aashii hadleen
Bulshada amar baa ku dhacay
Ugaadh didaybay noqdeen
Sibay u asqaysan yiin
Rajiyo amal baan lahayn
Ayaankuna hiilin waa
Waxay umaduhu dumaan
Akhlaaqda markay lunshaan.
Ammaantu waxay hoddaa
Nimaan runta aaminayn
Ilduufka waxaa yaqaan
Amaano qofkaan lahayn
Abaartuna waa qalbiga
Kashaa laga oon baxaa
Iimaankuna waa yiqiin.
Islaamka iyo daacaddii
Xaqii lagu uur samaa
Caqlaanigu eed ku sheeg
Daliilkana iin u yeel
Anaaniyad baa jirtee
Asxaabta badhbuu inkiray
Ujeedda kaluu u dhigay
Aroori ninkii u baxay
Armaa axankiisu yaal
Ninkii shar aloosayaw
Aday talo kuu egtahay.
Awoodda markuu isbiday
Markuu axdar sii dhexgalay
Iblays amar baa ku dhacay
Amaarad shishaa ku taal
Wuxuu ku aroorayaa
Halkay axashiisu tiil.
Abaalka in aanu gudin
Insaan waa lagu yaqaan
Qabbaa aadmiga ku ladhan
Aabiga duul baa kulumay
Abbaartuna waa sidii
Ayaamana waan aqaan
Halkay ku idlaanayaan.
Aloog ninka daaqsadaw
Artala roobbaa ka da’ay
War baa iimay ka jira
Ogaalka intaad ogtahay
Intuu aragaagu yahay
Miyuu aashaa cilmigu
Habeen ku ekaanayaa.
Abaajiga ruux ku lumay
Xaquu ka irdhoobayaa
Runtuu ka ilmaynayaa
Wuxuu ehel moodayaa
Halkay ajashiisu tiil
Adduunka nin qooqayaw
Ayaama kalaa jiree
Amaanada haysa siin.
Awood Rabbi baan u qiray
Ergana Nabigaa ahaa
Iimaankana deeq ka wayn
Aadmigu wili muu hantiyin
Arkaantuna way caddahay
Xaqaa la ajiibayaa
Allena toobaanu idhi.